Xaqiiqooyinka Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Champions League Ee Xalay. – Kooxda.com
HomeChampions LeagueXaqiiqooyinka Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Champions League Ee Xalay.
Xaqiiqooyinka Laga Diwaan Galiyay Kulamadii Champions League Ee Xalay.
April 15, 2021 Abdiwali Adan Jamac Champions League, Wararka Maanta 0
Waxa la soo afjaray kulamadii wareega 8 dhamaadka champions League iyada oo kooxaha Real Madrid iyo Man City iska xaadiriyeen wareega Semi-final-ka tartanka champions League.
Real Madrid ayaa bar-baro ku qabatay Liverpool halka ay Man City garaacday kooxda Borussia Dortmund sidaasna u dhamaystiray 4-ta kooxood ee Semi-final-ka tartanka.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa xaqiiqooyinka laga diwaan galiyay kulamadii xalay ee champions League:
1.James Milner ayaa noqday xiddigii ugu da’da weynaa ee kulan bug baxa ah ku bilowday shaxda Liverpool tan ilaa Ian Callaghan.
2.Taarikhda UFFA Champions League kooxda ku badisa 2/1 kulanka lugta hore iyaga oo jooga garoonkooda waxa la reebay 15 jeer laakiin Man City ayaa ka badbaaday rikoodhkaas.
3.Xiddiga da’yaka ah ee Jude Bellingham oo jira 17 sano 289 maalin aya ah xiddigii 2-aad ee ugu da’da yaraa ee ee dhaliya 10 kulan oo champions League kadib xiddiga Youri Tielemans oo rikoodhkaas dhigay 2014.
4.Jude Bellingham oo jira 17 sano iyo 289 maalin ayaa ah xiddigii 2-aad ee ugu yaraa ee gool k dhaliya champions League kadib Bojan oo sidaas u sameeyay Barcelona sanadkii 2008 isaga oo jiray 17 sano 217 maalin.
5.Rikoodhadii uu Riyad Mahrez dhaliyay ayaa soo afjartay 14 kulan oo uuna wax gool ah u dhalin champions League man City isaga oo goolkiisii ugu horeeyay u dhaliyay September 2019.
6.Xiddiga Phil Foden ayaa ah xiddigii 2-aad ee ka yaraa 21 sano jir ee gool dhaliya labada kulan ee 8 dhamadka champions League kadib Kylian Mbappe oo sidaas sameeyay xilli ciyaareedkii 2016/2017 markii uu joogay Monaco.
7.Tababaraha Man City Pep Guardiola ayaa gaadhay 8 dhamaadka champions markii 8-aad ee taariikhdiisa waana rikoodhka ugu badan ee uu tababare haysto isaga oo la mid ah Jose Mourinho.
8.Markii 2-aad ee taartiikhda champions League labada xiddig oo ka yar 21 sano jir kuwaas oo kala ah Jude Bellingham & Phil Foden ayaa wada dhaliyay gool kulamada bug baxa tan ilaa April 2017 markaas oo ay sidaas sameeyeen xiddigaha Kylian Mbappé & Ousmane oo u kala ciyaarayay Dortmund iyo Monaco.
9.Kulankii xalay ayaa ahaa midii 9-aad ee laba kulan ah ee uu Jurgen Klopp champions League hogaamiyay Liverpool waana markii 2-aad ee ay ku fashilmaan in ay guul gaadhaan labada kulan, kulankii hore ayaa ahaa kulankii Atletico madrid ee xilli ciyaareedkii hore.
Sii Akhriso: U Gaar Ah Dumarka: 5 Nooc Oo Dumarka Ah Oo Ay Raggu Iska Ilaaliyaan Waliba Ayna U Soo Istaagin, Ayay Kala Yihiin?